लाेकप्रिय सन्देश २०७३ पौष १० गते 29.39K
सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पुँजी र सञ्जालका हिसावले मुलुकको ठूलो बैंकमा पर्दछ । आफ्नो वित्तीय स्थिति सुधार गरे निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढेको यो बैंकले पनि चाँडै जना सर्वसाधारण जनतालाई समेत सेयर दिने तयारीमा छ् । चालु आर्थिक बर्षमा तीन अर्ब रुपियाँ नाफा गर्ने दौडमा रहेका यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले कर्पोरेट नेपाल डटकमको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘कर्पोरेट नेपाल’मा दिएको अन्तवार्ताको सार प्रस्तुत छः
राष्ट्रिय बाणिव्य बैंकको वित्तीय अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ ?
राम्रो र सुदृढ अवस्था छ । निक्षेप एक खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । कर्जा ८६ अर्ब रुपियाँ छ । गत बर्षको नाफा हेर्ने हो भने दुई अर्ब ६५ करोड रुपियाँ रहेको छ । अहिले नै ६८ जिल्लामा १७१ शाखाहरु रहेको छ । खराब कर्जाको अनुपात पनि तीन प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने स्थिति बनेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा नाफा अल्लि घटेको देखियो । तपाईंहरु तीन अर्ब नाफा गर्ने लक्ष्यमा हुनुहुन्छ । लक्ष्य पूरा हुन्छ त ?
तीन अर्ब नौ करोड रुपियाँको मुनाफाको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र योजनाका साथ अघि बढेका छौं । तपाईंले सही भन्नुभयो । पहिलो त्रैमासिकको नाफा घटेको भनेर । यसको दुई तीन वटा कारण छन् । गत बर्ष भूकम्प पछाडि कात्तिक महिनाको पनि मुनाफालाई तान्ने अवस्थाले गर्दा केही ओभरल्यापिङ भयो । यो बर्ष तीन महिनाको मात्रै मुनाफा हो । यही अवधिमा हामीले १२ अर्ब कर्जा बढाएका छौं । यता कर्मचारी खर्च, ब्याज खर्च, सञ्चालन खर्च घटेको छ । अहिले हामीले ब्याजदरमा पनि थोरै परिमार्जन गरी घटाएका छौं । केही अनुत्पादक क्षेत्रका कर्जाहरु छन्, तयसलाई निरुत्साहित गरी व्यापारिक कर्जामा जोड दिएको हुनाले मुनाफामा कमीको स्थिति देखिएको हो ।
तपाईंसँग नेपाल बैंकमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उक्त बैंक पनि वित्तीय संकटमा परेर सुधार भएको बैंक हो । त्यो अनुभवका कारणमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा के के सुधार गर्छु वा परिवर्तन गर्छु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
हिजोका दिनमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक दुवै समस्याग्रस्त बैंक हुन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आएपछि यसमा निकै सुधार आयो । अहिले जुन स्थितिमा आइपुगेका छौं, यसमा निके ठूलो फड्को मारेको स्थिति छ । अघि मैले जुन तथ्याङ्कहरु भने, त्यसको आधारमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलोमध्येमा र राम्रो मध्येमा पर्दछ । अझै पनि हामीले हाम्रो स्रोत साधनहरुलाई परिचालन गर्ने कुरामा कमी कमजोरी रहेको छ । त्यसमा सुधार गरेर बैंकलाई एउटा प्रतिस्पर्धी र स्वस्थ बैंक बनाउने कुरामा मेरो ध्यान जान्छ ।
सरकारी बैंकहरुले विगतमा वित्तीय अनुशासन पालन गर्न सकेनन् वा कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । कुन चाँही प्रमुख कारण हो ?
मेरो आफ्नो अनुभवमा संस्थागत सुशासन नहुनु नै प्रमुख कारण हो । व्यवस्थापनले संस्थागत सुशासन राम्रो बनाउन सकेन । एउटा संस्थाको कामकारवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी कुशल व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा माथिल्लो व्यवस्थापनबाट हुन सकेन । बैंकहरु बढदो प्रतिस्पर्धा, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरु हुन सकेन ।
तपाईंहरु आइपिओमा जाने (साधारण सेयर जारी गर्ने) कुरा थियो । के हुँदैछ यसमा ?
सरकारले विगतमा राष्ट्यि बाणिज्य बैंकको आठ अर्ब ५८ करोड सेयरको ३० प्रतिशत डाइमेन्शन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सम्मिलन एउटा कार्यदल बनाएर कुन मोडालिटीमा कसरी जाने ? भनेर कामहरु भइरहेको छ । कुन मोडालिटी भन्ने कुरा निश्चित भएको छैन । भर्खरै सरकारले यसलाई गति दिन पहल पनि गरेको छ ।
अहिले वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणका कुराहरु उठिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले जोड पनि दिएको छ । तपाईंहरुले यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रासङ्गिक कुरा हो । यही मात्रै पनि हामीलाई अर्थमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिनुभएको छ उहाँसँग छलफल हुँदा । हाम्रो जस्तो देश जहाँ ४० प्रतिशत मात्रै बैकिङ पहुँच भएको छ । धेरै जनता ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । त्यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति र सेवाहरु नबढनु भनेको विरोधाभास भइरहेको छ । जुन यो, वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणका कुरा छन्, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सिद्धान्त त सबै सहमत नै छन् । तर पनि हामी सरकार बैंक, पूर्ण सरकारी भएकोले यो कुरामा हामी यसपाली विशेष कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । आउँदो असारभित्र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम वृहतरुपमा विशेषगरी पिछडिएको क्षेत्रमा कसरी लैजाने र कति संख्यामा लैजाने भनेर कार्ययोजना नै तयार गरेका छौं । हामीले हाम्रो शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर ती ठाउँमा पुग्ने, शाखा पुग्न नसकेका ठाउँमा पनि शाखारहीत बैंकिङ सेवामार्फत सेवा पुर्याउने योजना छ ।
तपाईंहरु भन्नुहुन्छ निजी बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा छौं । यो कुरामा तपाईंहरुको कर्मचारी युनियन कत्तिको सहयोगी बन्ने गरेको छ ? कि पछाडि तानिरहेको छ ?
निश्चितरुपमा हामी सरकारी बैंक भए पनि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिस्पर्धामा नगईकन हामीले ग्राहकहरु आकर्षण गर्न सक्दैनौं । ग्राहकहरुले पनि सेवाको स्तर, ब्याजदरको स्थितिमा प्रतिस्पर्धा मागेको हुन्छ । त्यो कारण पन हामी प्रतिस्पर्धी हुनैपर्ने स्थिति छ । अरु बैंकको तुलनामा हाम्रोमा भिन्न परिस्थिति भनेको के भने यहाँ ट्रेड युनियनहरु छन् । यो कुरालाई कानुनीरुपले नै व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले सहजरुपले नै लिनुपर्छ । कतिपय कुराहरुमा हाम्रो र युनियनबीच मतभिन्नताहरु छन् । कतिपयमा छलफल पनि चलिरहेका छन् । तर पनि बैंकलाई अगाडि बढाउने कुरामा उनीहरुबाट सहयोगी भूमिका नै पाएका छौं ।
सरकारी बैंक भएकाकोले तपाईंहरुको र अर्थमन्त्रालयको पनि तालमेल मिलिरहनुपर्छ । यहाँ अर्थमन्त्रीहरु छ–छ महिनामा फेरिन्छन् । फेरिनासाथै उनीहरुको लक्ष्य र चाहना पनि फरक हुने भए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि पालन गर्नैपर्यो । यी कुराको तालमेल कसरी मिलाउनु भएको छ ?
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सरकारी बैंक भएकोले सरकारका नीति निर्देशनअनुसार अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । हामीले कुन सरकार, कुन पार्टीको, कुन व्यक्तिको भन्दा पनि सरकारले कुन नीति लिइरहेको छ ? कसरी अगाडि बढने भन्ने निर्देशन मै हामी अगाडि बढछौं । त्यस्तो हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन् । मैले आफूले पनि अध्ययन गर्दा जुन सरकार आए पनि आर्थिक विकासको कुरा र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र प्रवद्र्धनको कुरामा लगभग समाज खालको दृष्टिकोण र समाज नीति हुन्छ । केही कुराको प्राथमिकतामा मात्रै तलमाथि परेको छ । त्यस्तो धेरै र निकै फरक खालको नीति छैन ।
निजी क्षेत्रका बैंकहरुले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । ब्याजदर बढाउन तपाईंहरुका केही अप्ठ्यारा पनि होलान । तपाईंहरुको तयारी के छ ?
निजी बैंकहरुले ब्याजदरमा परिवर्तन गरेको हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । हाम्रो हकमा अहिले नै त्यसरी ब्याजदर बढाएर जानुपर्ने स्थितिहरु देखेका छैनौं । हामी त्यो पक्षमा पनि अहिले छैनौं । खाली हामी अध्ययनको क्रममा छौं । स्थितिहरु हेरिरहेका छौं । यद्यपि हाम्रो जुन खालको निक्षेपको स्थिति छ, जुन खालको हाम्रो ब्रान्चको फैलावट छ, यसले ब्याजदर बढाउने कुरामा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्दैनौं । त्यसमाथि हामीले ब्याजदरमा अझै सस्तो पनि गरेका छौं । त्यो हाम्रो सबल पक्ष हो ।
थप कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोला